Bahrain: Tsinio i Ahmed Zainal! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 9:04 GMT
Ny pejy Facebook, Omeo tsiny i Ahmed Zainal
Na iza na iza milaza fa ampiasaina fotsiny ho an'ny fikatrohana ao Afovoany Atsinanana ny aterineto. Ity dia vondrom-piarahamonina anaty aterineto goavam-be mankafy ny filalaovana ny fitaovana an-tserasera no sady tafaray anaty iraka iray – manome tsiny an'i Ahmed Zainal noho ny zava-drehetra sy izay rehetra ambanin'ny masoandro.
Ahoana no nanombohan'izany rehetra izany? Araka ny filazan'ny bilaogy, napetrak'ilay bilaogera Bahrainita Ammaro:
Tsotra. Nanapa-kevitra ny hihaona hanao geekup. Espalion Cafe, amin'ny 7:30 hariva ireo mpisera Twitter ao Bahrain ( teny ve izany?). Tsotra fotsiny, eny? Mazava ho azy, satria saika lehilahy ireo mpankafy aterineto ary vehivavy milalao pensilihazo matevina sy mandoko hoho mavokely ny ankamaroan'ny ankizivavy, andian-jatovo mipetraka manodidina miresaka momba ny adiresy IP, ny hotspot sheild, ny rapidshare vs bittorrent ny geekup, ary mandefa ny zavatra rehetra mba ho hitan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Ustream.
Tao amin'ny Twitter, nitohy ny resadresaka, miaraka tamin'ireo mpandefa sioka manameloka an'i Zainal amin'ny zavatra samihafa. Manazava i Ammaro:
Ary tao no nanombohan'izany … Saingy tsy nampoizina, tamin'ny fanamelohana an'i Zainal, fianakaviana iray manontolo no tafiditra tamin'ny fanomezan-tsiny, ary tampoka …
Ary dia nesorina izany … Tao anatin'ny ora roa, toa nanameloka an'i Ahmed Zainal ny rehetra, ary noho izany, niala tao an-tsain'izy ireo ny tambesatry ny rari-tsaina sy ny korontana …
Amin'ny lahatsoratra manaraka, mitanisa “#BlameAhmedZainal tsara indrindra raisina kisendrasendra sasany” i Ammaro. Anisan'izy ireo ny:
@ ammar456: Maty tamin'ny 100 tapitrisa taona lasa ny dinôzaoro #BlameAhmedZainal
@Lamya: Loool RT: @ omar9944 Nitatitra ny CNN fa #BlameAhmedZainal noho ny 9/11 i George Bush
@ ahmed2250: Manelingelina ny Twitter ankehitriny noho ny #BlameAhmedZainal rehetra ary noho izany dia tena #BlameAhmedZainal aho
@baderkamal: Fiakaran'ny mari-pàna manerantany = #BlameAhmedZainal
Tao amin'ny Facebook, Yacoub Al-Slaise naka dingana lavidavitra – ary namoaka ity lahatsary ity. Tsindrio eo raha te hihomehy ianao!
Namoaka ity lahatsary ity tao amin'ny YouTube ihany koa i Ammaro, izay ilazany amin'izao tontolo izao izay tokony homena tsiny noho ny ratsy rehetra!
Nampiasa fahalalahana amin’ity sariitatra ity ihany koa i Redbelt, izay manameloka an'i Ahmed Zainal:
Ny fanomezan-tsinin'i Redbelt amin'iAhmed Zainal
Nihaona tamin'i Ahmed Zainal ny Global Voices Online mba hahitana bebe kokoa:
F. Iza moa i Ahmed Zainal? Ary inona no ataonao?
Bahrainita monina ao Bahrain aho. Miasa ho manam-pahaizana momba ny seraseram-bahoaka ao amin'ny Orinasan'ny Fifandraisan-davitra Bahrain (Batelco). Mpanakanto mozika elektronika ihany koa aho ary mpankafy media sosialy.
F. Ahoana no fahitanao ny #BlameAhmedZainal? Inona no vokatr'izany teo aminao?
Andeha lazaina fotsiny hoe, faly aho fa maty izany, tpt! Saingy am-pahatsorana, faly aho fa tafiditra ao anatin'ny sary-sy-soratra nahazo olona maro tao amin'ny twitter, miezaka ny halaza [hironana ao amin'ny twitter]. Te-hanomboka iray foana aho, saingy tsy nieritreritra mihitsy hoe ho eo afovoan'ny iray aho! Ny ampahany mahafinaritra indrindra dia ny mamaky ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Google momba ny tenirohy … maro tokoa ny tsiny … -_- ‘
F. Inona ny asanao an-tserasera?
Misioka betsaka aho. BETSAKA. Araho ny @ahmedzainal mba hahitana ny tiako lazaina! Asehoko ao amin'ny virb sy Facebook ny mozikako. Ao amin'ny aterineto aho amin'ny ankamaroan'ny fotoana (na eo amin'ny ordinatera na smartfinday) ary lasa ampahany manan-danja amin'ny andavanandroko izany.
F. Ahoana no fiantraikan'ny tambajotra amin'ny fiainanao?
Tsy misy andro iray tsy haniriana hilazana zavatra amin'izao tontolo izao; na inona na inona! Nahafahantsika nanao izany ny Twitter sy ny fitaovana media sosialy hafa. Lasa kely kokoa izao tontolo izao.
Tontolo madinika tokoa! Saingy tadidio, raha toa ka simban'ny orana ny fikasanao hanao barbecue, raha tsy mandeha ny fiaranao indray andro any ary efa tara ianao handeha hiasa, raha masiaka aminao ny lehibenao na raha miady ny sakanao – ny tokony ataonao dia ny #BlameAhmedZainal.
5 andro izayIràna